Azonao atao ve ny mampiseho ahy ny fomba fanao tsara indrindra hahazoana rohy vaovao ho an'ny SEO?
Tsy ilaina ny milaza fa vao haingana no nanjary zava-dehibe tao amin'ny Search Engine Optimization (SEO) noho ny hatramin'izay ny fananganana rohy. Izany no mahatonga ny fiverenana vaovao vaovao - na ara-boajanahary na ara-boajanahary - dia TSY ho an'ny tompon'ny tranonkala sy tompon-tranonkala te-hanana fandrosoana goavana ao amin'ny SEO, miaraka amin'ny tetikasa an-tserasera hita eo amin'ireo valin'ny fikarohana. Andao hiatrika izany - Ny fahazoana lamosina vaovao izay tena miasa amin'ny fampiroboroboana an-tserasera dia tsy ny mikasika ny fitokisany na ny lazany ihany. Midika izany fa ny fanorenana rohy voajanahary dia tena mijoro amin'ny vidiny tena marina amin'ny tranokalanao na bilaogy - amin'ny farany, ny hitarika ny mpifaninana mpifaninana ary ny tetikasanao manokana dia tokony hizara, hanonona sy hampifandray amin'ny. Noho izany, tsy ilaina ny miezaka manandrana manangona ny isa makotrokotroka vaovao. Tsara lavitra ny fametrahana ny lanjany amin'ny kalitao sy ny zavamaniry voajanahary - voalohany indrindra. Ataovy fampisehoana aho mba hampahafantarako ny rindran-damba vaovao izay mety tsara indrindra - amin'ny votoatinao.
Ny votoaty miavaka izay manome valisoa bebe kokoa
Alohan'ny zavatra hafa, ny tranonkala na blôgy rehetra dia tokony hanana votoatin'ny pejy matanjaka izay manome lanja lehibe ho an'ireo mpihaino mahaliana mpampiasa na ny lasibatry ny mety ho mpanjifa manantena ny hiova fo ho an'ny tena mpanjifa. Amin'izany fomba izany, indrindra indrindra ny pejin-tranonkalanao dia mety ho takatry ny Google ho kokoa kokoa noho ny tranonkala hafa an-tserasera, fa tsy tranonkala hafa na bilaogy mifandraika amin'ny lohahevitra na ny orinasa orinasa iray ihany. Ny tena zava-dehibe dia ny hahazoan-drakitra vaovao miaraka amin'ny votoaty tsy manam-paharoa sy avo lenta dia midika fa handray soa ianao avy amin'ireo rohy context, fantatra ihany koa ho ireo mahery indrindra amin'ny SEO White-Hat.
Fanamafisana sy fampisehoana votoatin-kevitra
Diniho ny famerenana ny ampahany amin'ny asa soratranao (na farafaharatsiny ireo olona manahirana indrindra) ho lasa fitaovana tsara sy tsara indrindra amin'ny votoaty hita maso. Midika eto aho fa ianao dia manolo-tena hampiasa ny fotoanao amin'ny famoronana endriny malaza amin'ny ankapobeny izay azo antenaina hanohanana anao fitaterana tranonkala lehibe kokoa, ary manintona ny ankamaroan'ny rindran-damina amin'ny fotoana iray - amin'ny ankapobeny. Amin'izany fomba izany, dia tokony hifantoka kokoa amin'ny famoronana ny sary, tarehin-tsoratra, sary amin'ny tombam-bidy fanampiny izay hanohy hanangona rindran-kira bebe kokoa ianao amin'ny alalan'ny fanantenana.
Blogging Guest izay Manangana ny Fahefanao
Ny fomba fitadiavana ireo mpamaham-bolongana malaza ao amin'ny orinasa na ny mpilatsaka ambony indrindra amin'ny indostrian'ny orinasa dia mbola fomba tsara Tsy vitan'ny hoe mahazo vola madinidinika roa miaraka amin'ny PageRank tena matanjaka, fa hanangana ny fahefanao sy ny fitokisanao amin'ny mpampiasa. Farany - mba ho lasa loharanom-pahalalàna momba ny sehatra manokana eny an-kianja, noho izany dia mitarika ny fitarihana sy ny fanaovana ny tranokalanao na ny bilaoginao hivoaka amin'ny fifaninanana karoka. Mandritra izany fotoana izany anefa, aza adinoina fa isaky ny manolotra mailaka an-kalamanjana ho an'ireo namana mpitoraka bilaogy ianao - dia mahazo tombony ianao amin'ny alalan'ireo backlinks mendrika mba hitarika mpitsidika maro kokoa amin'ny pejy manokana anao Source . Ataovy tsotra fotsiny ny fanoratana ireo lahatsoratra nasaina tadiavina ary ny fanerena laharana bilaogy ho an'ny tanjona tsara - ary vita ianao!